Mpikatroka Fampitam-baovao Syriana : ‘Tena Mampatahotra Sy Mampihorikoditra, Lasa Tanànadehiben’ny Horohoro i Aleppo’ · Global Voices teny Malagasy
Mpikatroka Fampitam-baovao Syriana : ‘Tena Mampatahotra Sy Mampihorikoditra, Lasa Tanànadehiben'ny Horohoro i Aleppo’
Voadika ny 17 Desambra 2016 6:26 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, Ελληνικά, 日本語, Magyar, 繁體中文, Español, Nederlands, 简体中文, македонски, عربي, bahasa Indonesia, Shqip, English
Gnaid, afovoany, miaraka amin'ny zanany vavikely vao teraka sy ny fianakaviany. Nahazoana alàlana .
“Velona i Aleppo Ary Tsy Ho Faty!”
Izany no nosoratan'i Gnaid mpanao gazety mpamokatra lahatsary tao amin'ny Facebook rehefa nanambara ny fahaterahan'ny ny zanany vavikely izy, izay zanany faharoa, tamin'ny Alakamisy, 24 Novambra 2016.
Miasa miaraka amin'ny vondrona mpikatroka fampitam-baovao (AMC) Foibe Fampitam-baovao ao Aleppo i Gnaid any amin'ny faritra atsinanan'ny tanànan'i Aleppo any Syria. Manana fifandraisana aterineto tsindraindray amin'ny alalan'ny zanabolana izy ary afaka mifandray amin'ny Global Voices avy amin'izany. Miara-mipetraka amin'ny vadiny, ny zanany lahy, sy ny zanany vavikely vao teraka ary ny havany roa izy.
Teraka sy nihalehibe tao anatin'ny ady ireo zanany roa. Tamin'ny herinandro lasa teo, nilaza tamin'ny Global Voices tamin'ny andianà fifandraisana i Gnaid fa roa kilometatra monja miala amin'ny tranony no misy ny tafiky ny fitondrana Syriana , ary matahotra mafy ny olon-tsotra sy ireo matihanina amin'ny fampitam-baovao izay mbola any atsinanan'i Aleppo.
Tamin'ny fotoana nanoratana, voalaza fa mifehy ny ankamaroan'ny faritra atsinanan'i Aleppo ny tafika izay manohana ny Filoha Bashar al-Assad rehefa nanao fandrosoana haingana tao anatin'ny andro vitsivitsy noho ny daroka baomba Rosiana sy ny fanohanana lehibe avy amin'ny milisy tohanan'ny Iraniana. Nanomboka tamin'ny taona 2012, nizara roa ny tanàna ka an'ny mpioko ny atsinanan'i Aleppo ary an'ny fitondrana ny ao andrefan'ny Aleppo. Tamin'ny Desambra 2013 no nandatsahan'ny fitondrana ny baomba barika voalohany tao Aleppo, ary nanomboka teo dia maro ny karazana fitaovam-piadiana nampiasaina, nanomboka tamin'ny fitaovam-piadiana simika ka hatramin'ny baomba mitsipotipotika, ary nahatonga ny faritra atsinanan'ny tanàndehibe ho rava tanteraka. Nametraka fahirano feno herisetra ny fitondrana avy eo tamin'ny Jolay 2016 satria nanambara ny fikasany haka indray ny atsinanan'i Aleppo ao anatin'ny volana vitsivitsy izy.
Tojo sakana maro i Gnaid sy ny fianakaviany rehefa nieritreritra ny hiala tao atsinanan'i Aleppo. Sarotra ny fandehanana ao Torkia mpifanolo-bodirindrina, ary atahorana ho an'ny mpikatroka ara-pampitam-baovao matahotra fisamborana, fampijaliana na fahafatesana mihitsy aza ny faritra ao Syria tazonin'ny fitondrana. Nanamarika i Gnaid fa raha mitolo-batana sy mitondra ny sarin'i Assad izy dia ho velona, kanefa tsy manaiky izany ny reharehany sy ny fahamendrehany. Mampietry loatra izany hoy izy tamin'ny Global Voices. Nanapa-kevitra ny hijanona any amin'ny faritra atsinanan'i Aleppo noho izany i Gnaid sy ny fianakaviany.
“Mipoaka mafy ny baomba androany alina” hoy i Gnaid tamin'ny Alarobia 7 Desambra. “Mampihorohoro sy mampatahotra, lasa tanànan'ny horohoro i Aleppo .” Miampanga ny vondrom-piarahamonina iraisampirenena izy noho ny tsy fieritreretana “ny maha-olombelona”:
Tsy manana pasipaoro izaho sy ny vadiko. Tsy afaka mifindra toerana izahay, kanefa afaka mivelona eto Aleppo ihany, na dia nandritra ny ady aza. Misy ny vahaolana ankehitriny. Zonay ny miaina am-pahamendrehana sy am-pahalalahana, toy ny olona rehetra eto amin'izao tontolo izao. Saingy indrisy tsy re ny feonay noho ny tabataban'ny fitaovam-piadiana! Olona maro no namoy ny tranony ary noroahina tamin-kerisetra sy baomba. Angamba hiverina amin'ny fitondrana ny eto amin'ny manodidina anay. Kanefa hifikitra eto amin'ny taninay izahay ! An'ny Firenena Mikambana sy ny fikambanana iraisam-pirenena rehetra ny henatra izay tokony hamonjy ireo naratra kanefa nanda ny hanao izany!
Nandefa hafatra iray hafa i Gnaid avy eo:
Tena sarotra ny toe-draharaha. Tsy hitako izay holazaina. Mijery ireo vahoaka aho. Tsy te-hiala eto aho. Tsy te handao an'i Aleppo aho. Reraka aho ary drodroka tanteraka. Kanefa tsy misy azoko atao afa-tsy ny mijanona. Eto ny taniko. Tsy misy zavatra hafa ho ahy ankoatra an'i Aleppo. Tsy fantatro intsony izay tokony hatao . Eo am-pelatanan'Andriamanitra izany .
Farany, tamin'ny Alakamisy 8 Desambra , nandefa izay noheveriny fa hafatra farany i Gnaid .
Antsasakadiny lasa izay no nanomboka ny ady teto. Misy ny sahotaka goavana. Indrindra amin'ny ankizy. Tena sarotra dia sarotra ankehitriny. Misy ny fanafihana amin'ny alalan'ny balafomanga ataon'ny tafika Syriana. Tsy ho ela dia ho raikitra ny ady ankehitriny.
Soa ihany fa nahavita nandefa raki-peo fanamarihana fohy taty amin'ny Global Voices ny marainan'ny Talata 13 Desambra izy, nanao hoe:
Misaotra an'Andriamanitra fa tsy maty fo aman'aina izahay . Mbola miandry izay higadonan'ny hitranga aminay izahay.
Mandritra izany fotoana izany, nandefa lahatsary mampiseho ny endriky ny faritra iray manontolo ny mpiara-miasa aminy tao amin'ny Foibe Fampitam-baovao ao Aleppo mba anehoana ny faharavana manerana ny faritra manodidina an'i Al Shaer any atsinanan'i Aleppo.
Ho an'i Gnaid sy ny fianakaviany, tsy manao na inona na inona mba hampitsaharana ny fandatsahan-dra ny vondrom-piarahamonina iraisam-pirenena. Ny hany fanantenana izao, hoy izy, dia ny ahafahany sy ny fianakaviany mivoaka soa aman-tsara mankany amin'ny faritra sisa fehezin'ny mpanohitra ary manantena fa tsy hanaraka ny olona any amin'ireo sisa ny fiaramanidina mpiady .